Izandla ze-kindergarten: imifanekiso yasebusika-izicelo ezisuka kwikolon ye-cotton, kwiklasi yeklasi kunye nesithombe
Imisebenzi yonyaka omtsha kwi-kindergarten: ifoto-applique ukusuka kwiboya yekotoni
Inqanaba leSifundo seMatriki liza kukuxelela indlela yokwenza izicelo ezimnandi zasebusika ukusuka kwiidiski zekotoni.
Isicelo sisebenza kakuhle kwaye ngexesha elifanayo indlela enomdla kakhulu yokuphuhlisa izakhono ezincinane zezithuthi zezandla kunye nokucinga. Kwaye ukuba xa kufike ixesha elifudumeleyo ukuhlala etafileni, akulula, ke kwiintsuku zokubanda zasebusika eso sifundo siya kuba samkelekile. Ngoko ke, sikubonelela ngeeklasi ezimbini zezihloko ngesihloko esithi: "appliqué kusuka kwi-cotton wool - imifanekiso yeemahla zasebusika."
Faka isicelo kwiboya yekotoni: umfanekiso webusika, isifundo seklasi
Esi sicelo sidibanisa ukulula ukusebenza, ukufumaneka kwezixhobo kunye nobuhle bobunjwa, ngoko kulungelelanisa imisebenzi yabantwana.
amakhadibhodi eluhlaza okwesibhakabhaka okanye eluhlaza okwesibhakabhaka (i-holographic);
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo ekudaleni umfanekiso wobusika kwiidiski zokuzicoca:
Siqala ukwenza umfanekiso webusika wee-appliqués ezenziwe ngoboya bekotoni ukusuka kumthi omhlophe wefestile. Siza kufaka kwikhadibhodi kufuphi nomda osekhohlo. Njengomgqomo kuye, sikhetha enye ikoton wand, kunye nesithsaba sekhephu siya kusebenza njenge-cotton wool disc. "Tyala" isitya sethu kwikhadibhodi ngeglue.
Sinqumle iidiski ezininzi kwisiqingatha kwaye senze iinguqu ezivela kule miqolo, sizenzele ngaphantsi komgca wekhadibhodi.
Kunzima ukucinga umfanekiso webusika ngaphandle komthi weKrismesi. Ngako oko, le ndwendwe yehlathi iya kuba kwisicelo sethu. Ukuze ukwenze, ukugoba uboya olunye lwepotton kwisiqingatha, udwebe umthi wesiKrismesi kuwo uze uyinqumle. Sifudula umshicilelo kwaye siwubuthe phakathi kweqhwa leqhwa elisecaleni lomthi onqabileyo.
Ngoku, ukusuka kumgca wediski edibeneyo, sinciphisa inyanga encinane kunye nekisi, kwaye ukusuka kwiincinci ezincinci zoboya bekotoni senza iiflekhi zeqhwa (okanye iinkwenkwezi - esizibathandayo kakhulu). Sidibanisa le nxalenye yomfanekiso kwikhadibhodi ngeglue - kwaye indawo yasebusika ilungile!
I-Snowman eyenziwe ngoboya bekotoni, iklasi yeklasi kunye nesithombe
Umxholo wasebusika awukwazi ukwenza ngaphandle kwe-snowman-ibhola eliqhubekayo leendaba zonyaka omtsha kunye nomhlali weeydi ehlanganiswe ngekhephu.
ikhadibhodi enemibala (eluhlaza okwesibhakabhaka, isilivere kunye nomnyama);
umlawuli kunye neepensile;
ububanzi (ibini lomnyama kunye nomvu omnye);
amaqhosha amancinane (amathathu);
isebe lomthi (omncinci).
Umyalelo wenyathelo-nge-nyathelo yokwenza i-snowman
Lungiselela isakhelo somfanekiso wethu wesilivere (grey) kwikhadibhodi. Ukwenza oku, vula iphepha lekhadibhodi uze udwebe umxube phezu kwalo, uphendule u-2 cm ukusuka kumda ngamnye. Amaconsi amabini kule ngxande ijikelezwe - ngakwesokunene nangaphezulu kwekhohlo. Sinqumle iphepha eliphakathi kwekhadi lekhadibhodi. Isakhelo esiphumela siphuculelwe kwiphepha lekhadibhodi eluhlaza, okuya kuba sisiseko sesicelo.
Masiqhubekele kwiqhawe lesicelo - i-snowman eyenziwe yelinen yekotoni iya kuba neengxenye ezintlanu: intloko, izandla zombini, i-trunk kunye nxalenye ephantsi. Idiski eya kusetyenziswa njengentloko, yenza ubuncinci ubuncinci kwaye unqamle umgca omnye kunye ne-arc ngokukhawuleza ukuze ugweme umbhoxo nge-trunk. Kwakhona, yenza nge trunk, unqamle umda ukuze ungagqithanga inxalenye engezantsi. Iidisks, apho siza kwenza izandla ze-snowmen, sinqume ngaphezu kwe-3 cm ububanzi.
Ukusebenzisa i-glue, gcoba zonke iimbali ze-snowman kwikhadibhodi uze umenze ibhakethi-ibhakethi lekhadibhodi emnyama. Ukwenza oku, nquma i-trapezium ukusuka kwikhadibhodi enobude obude be-5 cm kunye ne-vertex ye-3 cm uze uyihlanganise entloko ye-snowman ene-PVA glue.
Ngeglue elithi "Moment" sidibanisa ubude bamnyama ngendlela yamehlo entloko yomntu weqhwa, ubhontshisi obomvu - ngendlela yempumlo kunye neqhosha kwi-trunk.
"Sibeka" i-snowman kwi-discton cosmtic discs ekhephu, eyenziwe ngeengcezu zoboya bekoton, kwesinye sezandla "faka" umtshumo ovela kwisigane.
Ukuba unqwenela, unokwenza lo mzobo owenziwe ngezandla zasebusika ngesimo somfanekiso, okwenza uhlangothi oluphambeneyo lwamaphetshana wephepha kunye nokwelula kwintambo yokubopha.
Abantwana abanikiweyo: iingxaki, ukukhangela iindlela zemfundo noqeqesho
Indlela yokukhetha i-ski efanelekileyo kumntwana wakho
Yintoni uthando lomntwana wakho?
Amagama afanelekileyo kunye nemfashini yamantombazana 2016
Indlela yokuququzelela umgangatho weklasi kwiklasi 9
Umxube we-Litical: izibonakaliso zokusetyenziswa
Indlela yokufunda ukugcina: cwangcisa uhlahlo lwabiwo-mali
Phuza iresiphi ukusuka kwi-gooseberry nge-lemon kunye ne-orange, ubukhosi kunye ne-walnut. Jelly kwi-gooseberry kwi-multivark
Abafazi abahle kakhulu kwixesha lonke
Ngaba Ukuphela kwehlabathi kuya kuba?
Indlela yokufumana isitayela sakho
Umtshato kaDmitry Peskov noTatyana Navka yinyani?
Ziziphi iimpawu zokukhetha ukwakheka
Feijoa noshukela, iindlela zokupheka ezingcono kunye nezithombe
Impawu - ukuguga isikhumba
Isonka kunye nesobho
Umqeqeshi echibini: kutheni ufuna kwaye unokufundisa ntoni?
Indlela yokutshintshela ekunceliseni
Champagne nge ngaliswa
Indlela yokwahlula i-markmark yokuzalwa kwi-melanoma
Imibuzo ebuzwa ngokuphindaphindiweyo malunga nesondo
Izidlo ezi-8 ezivunyiwe yizesayensi
Indlela yokunyamekela isikhumba sakho ekhaya